ApexChat: Zaghachi na mkparịta ụka webụsaịtị gị 24/7 na ndị nnọchi anya mkparịta ụka maara | Martech Zone
ApexChat: Zaghachi na mkparịta ụka webụsaịtị 24/7 Ya na ndị nnọchite mkparịta ụka maara nke ọma
Ndị ahịa anyị ole na ole nwere nnọọ obi ụtọ na nkata ha jikọtara na saịtị ha… ruo mgbe anyị kpughere ụfọdụ ozi dị egwu. Mgbe anyị tụlere nkata ahụ na-eduga ihe anyị chọpụtara bụ na ndị na-edu ndị na-akpakọrịta onye nnọchi anya na-emechikarị mgbe ha na onye ahịa haziri oge.
Nsogbu dị na nkata Webụ
Ndị ahịa ahụ zara naanị maka nkata ozugbo n'oge awa ọrụ ha. Mkparịta ụka ọ bụla na-abụghị oge ọrụ rịọrọ email ma ọ bụ akara ekwentị. Nke a bụ nnukwu okwu… ọtụtụ n'ime oku ha na-abịa n'èzí nke awa azụmahịa na mgbede na na ngwụsị izu. A na-esochi ụzọ ndị ahụ mana ọ naghị azakarị ya na ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ emechighị.
Enwere atụmanya na webchat. Mgbe itinye nkata ahụ na saịtị gị, ndị mmadụ na-atụ anya na ị ga-aza. Ma ọ bụrụ na ị naghị aza… ha na-aga n'ihu na saịtị na-esote. Ndị mmadụ na-arụkarị ọrụ Mọnde ruo Fraịde n'ụbọchị niile, ha anaghị ebido ọrụ nyocha ruo mgbede ma ọ bụ izu ụka mgbe ha nwetara oge. Ma mgbe ha mere… ịkwesịrị ịnọ ebe ahụ!
Ndị nnọchite nkata Live Pay-For Performance
ApexChat na-enye ọrụ nkata turnkey zuru oke. Ha na-eji ndị ọrụ nkata ndụ zụrụ azụ na ikpo okwu sọftụwia na-eje ozi nkata. Nke a pụtara nnukwu ego na-akwụ ụgwọ ka anyị na-ewepụ mkpa ọ dị ịwepụ ndị ọrụ gị isi n'ọrụ ha bụ isi maka ijikwa nkata ma ọ bụ were were zụọ onye ọ bụla ka ọ malite.
Ndị ahịa ahụla, na nkezi, nke ahụ 42% nke ndị ntụgharị ntụgharịd site na nkata ndụ na-eme mgbe oge ọrụ a na-ahụkarị nke elekere 9 nke ụtụtụ ruo elekere ise nke mgbede Na-enweghị mkpuchi elekere, ị nwere ike na-efu ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkara ụzọ ị ga-esi nweta n'aka onye na-eweta nkata Live gị.
Kachasị mma, ewezuga ụgwọ ọnwa opekata mpe $50 ha, ApexChat naanị na-ana ụgwọ otu ụzọ maka n'ezie ruru eru na-eduga nke ezitere gi. Enweghị nkwekọrịta ogologo oge, ma ị nwere ike ịkagbu ọrụ ahụ n'oge ọ bụla na-enweghị ntaramahụhụ ọ bụla.
Ndị nnọchi anya nwere ike ịzaghachi site na nkata webụsaịtị gị, Facebook Messenger, nkata Google My Business, ma ọ bụ ọbụna site na SMS. Ha nwere ike jikọọ onye ọbịa na onye nọ na ụlọ ọrụ gị site na ekwentị ma ọ bụ hazie oge ọhụhụ n'aha gị. Ha na-enye ọbụna ihe ọpụpụ-ebumnobi popup iji jide ndị ọbịa nwere ike ịpụ.
Anyị etinyela azịza ya na ndị ahịa 3 ugbu a, gụnyere otu Indianapolis ụlọ ọrụ nkwekọrịta, na ha niile nwere obi ụtọ na ọkwa ọrụ na nzaghachi ọkachamara nke ndị ọrụ nkata na-enye. Na… kacha mma, ha maara na ha anaghị akwụ ụgwọ maka ndị spammers ma ọ bụ ndị na-erughị eru. ApexChat na-enyekwa ngwa mkpanaaka, ngwọta akara ọcha, ọnụ ụzọ ndị mmekọ, yana ọnụ ụzọ ndị ahịa nwere nyocha siri ike.
Ụlọ ọrụ akwadoro ApexChat
Ụlọ ọrụ ndị ApexChat na-akwado gụnyere ọrụ ụlọ, ndị ọka iwu, ndị na-ahụ maka ahụike, nnabata kọleji, na ọbụna ụlọ ọrụ ịzụ ahịa. Ha na-ejikọta ọgbọ ndu ha n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ kọntaktị ọ bụla, ntinye okwu, mgbasa ozi, nyocha, ma ọ bụ ikpo okwu ahịa ma na-eje ozi ugbu a karịa azụmahịa 8,000.
ApexChat bụ ngwa nkata kacha mma na azụmaahịa iwu. Anyị na-etinye oge buru ibu na nyocha nke bụ ụlọ ọrụ kacha mma, enwere m obi ụtọ na anyị kpebiri na ApexChat. Anyị na ha enwebeghị nsogbu ọ bụla. Akụrụngwa ha na-eme ka ọ dị mfe ime ihe oriri, anyị na-enwetakwa transcript nkata ozugbo. Ana m akwado ApexChat nke ukwuu.
Eric Stevenson, onye ọka iwu
Rịọ ihe ngosi ApexChat
Nkpughe: Anyị bụ onye mmekọ na mmekọ maka ApexChat ma na-eji njikọ njikọ anyị n'isiokwu a.
Tags: apexchatusoro ihe omumeonye ọka iwu nkataonye ọka iwu ndụ nkataikorindị ọrụ nkatankata ọrụ ụlọnkata ụlọ na-akparịta ụkaonye ọka iwu nkataonye ọka iwu ndụ nkataedu ndúnkata ndụnkata ndụ ahụikenkata ọrụ ahụikekwụọ ụgwọ maka arụmọrụkwụọ kwa ụzọruru eru na-eduga